Artificial Topography Ny Topografika Artifisialy - Famolavolana
Ny Topografika Artifisialy
Ny Topografika Artifisialy Fitaovana lehibe toy ny lava-bato Ity no tetik'asa nahazoana loka nomena ny loka lehibe indrindra amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena Container. Ny hevitro dia ny hamoaka ny ao anaty fitoeran-java-masina mba hanamboarana toerana amorphous toy ny zohy. Vita vita amin'ny plastika ihany no vita. Eo ho eo ny takelaka vita amin'ny plastika malefaka 10 mm ny hatevin'ny 10 mm ary nopotehina toy ny stratum. Tsy zavakanto ihany izany fa fanaka lehibe ihany koa. Satria ny faritra rehetra dia malefaka toy ny sofa, ary ny olona miditra amin'ity sehatra ity dia afaka miala sasatra amin'ny alàlan'ny mahita ny toerana mety amin'ny endriny.
Anaran'ny tetikasa : Artificial Topography, Anaran'ny mpamorona : Ryumei Fujiki and Yukiko Sato, Anaran'ny mpanjifa : .
Ny Topografika Artifisialy Ryumei Fujiki and Yukiko Sato Artificial Topography